Barcelona Oo Noqotay Kooxdii Ugu Xooga Badneyd Ee Hogaamisa Horyaalka La Liga Bilowgiisa Muddo 13-sano Ah – Heemaal News Network
October 3, 2017 Cayaaraha
Shaki badan ayaa laga qabay iney Barcelona sameyn doonto bilow fiican marka la eego horyaalka La Liga madama uu kooxda ka huleelay Neymar Junior oo ka mid ahaa xidigahii ugu fiicnaa kooxda ka dhisan Camp Nou xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Balse Balaugrana waxey noqotay kooxda ugu xooga badneyd ee hogaanka horyaalka La Liga ku dhagta waliba xiliga hore tan iyo sanadkii 2004/2015 markaas oo ay isla Barcelona si awood leh ku furatay ciyaaraha maxaliga ah.
Wiilasha Ernesto Valverde waxey hanteen 7-guulood iyagoo helay 21-dhibcood, kaliya 2-gool ayaa laga dhaliyay halka ay 23-gool shabaqa ku shubeen.
Rikoorkaan oo kale waxaa sameeyay kooxdii Barcelona ee uu maamulayay Frank Rijkaard kuwaas oo guul gaaray 7-kuulan oo xiriir ah xilli ciyaareedkii 2004/2005.
Tan iyo waqtigaas ma jirin koox sidaas oo kale sameysa, inkastoo la rajeynayay iney si xun ku bilaabato hadana 5-dhibcood ayey ka sareeyaan kooxda kusoo xigta oo ah Sevilla kuwaas oo qudhooda 5-jeer guuleystay 1-jeerna barbaro galay.
Real Betis, Deportivo Alaves, Espanyol, Getafe, Eibar, Girona iyo Las Palmas ayey seefta Barcelona qaaday, inkastoo lasoo warinayo in Balaugrana aysan wali marin tijaabo adag.
Valencia, Real Madrid & Atletico Madrid ayaa loo arkaa tijaabada ugu xooga badan ee lala sugayo Barcelona, balse qaabka wanaagsan ee uu Lionel Messi ula falgalay xilli ciyaareedkaan ayaa loo xaglin karaa guulaha kooxda Camp Nou ka dhisan.
Ashkato Laga Gudbinayo Xisbiga Naziyiinta Oo Ku Banaanbaxay Sawirro Siyaasiyiin Iyo Suxufiyiin Dalka Swedan
Xaflad Soo Dhawayn Ah Oo Saddexda Gole Ee Dawladu Muqdisho Ugu Sameeyeen Maryan Mursal Ciise
Ronaldo Oo Tafaaful Ka Qaday Ganaaxii Ciyaareed Ee La Saaray Ilaa Haddana Aan Gool Ka Dhalin Cayaarta La Liga
October 2, 2017 Cayaaraha
Waxey u aheyd xalayto markii ugu horeysay oo uu ku fashilmay Cristiano Ronaldo inuu shabaqa soo taabto sadex kulan oo xiriir ah kulamada furitaanka horyaalka La Liga waayahiisa Real Madrid oo soo jiitamayay tan iyo […]
Zinedine Zidane Oo Gaaray Guushiisii 50-aad Ee Horyaalka La Liga Rikoodh Cusubna Dhigay
Real Madrid ayaa gaartay guushii ugu horeysay horyaalka La Liga kulamada gurigooda, waxeyna soo afjareen dhibaatadii ay ku qabeen gurigooda madama ay kaliya 2-dhibcood ku heleen sadexdii kulan ee ugu dambeysay horyaalka. Kulankaan wuxuu mudnaan […]